thinzar's blog: Legoland Trip
အရင်လက မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေလာတုန်း တစ်နေရာရာသွားလည်ကြမယ်ဆိုတော့ ပီနန်၊ ကန်မရွန်းဟိုင်းလန်း၊ မလက္ကား ဘယ်သွားကြမလည်း ရွေးရင်း တစ်ယောက်မှ မရောက်ဖူးတဲ့ Legoland ကိုသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ မလေးရှားမှာ ရောက်ဖူးသမျှမြို့တွေထဲမှာ tourist-friendly မဖြစ်ဆုံးမြို့ဘဲ။ :D ၂ရက်လုံး တက္ကစီကော ဘတ်စ်ကားကော စီးရတာ တိုင်ပါတ်နေတယ်။ ဂျိုဟိုးဘာရူးမြို့က စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေ အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်လို သွားနေတဲ့မြို့ဆိုတော့ စင်ကာပူရီယန်းတွေကို အဓိကထားပြီး အရာရာကို စျေးတင်ထားသလိုဘဲ။ တက္ကစီ စီးရတာတင်ကို တော်တော် ပိုက်ဆံကုန်သွားတယ်။
ကေအလ် ကနေ ဂျိုဟိုးဘာရူးကို လေးနာရီကျော်လောက် ဘတ်စ်စီးရတာဆိုတော့ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ နှစ်ရက်တစ်ညနေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အစက ပထမတစ်ရက်မှာ ဂျိုဟိုးဘာရူးမြို့ထဲ ပါတ်လည်ဦးမယ်ဆိုပြီး မြို့ထဲကဟိုတယ်ဘဲ လိုက်ရှာတာ။ Hotel Sentral က ပေးတဲ့ ဟိုတယ်+legolandဝင်ခွင့်လက်မှတ်+မနက်စာဘူဖေးရယ် ကို တစ်ယောက် ရင်းဂစ် ၁၈၀ဆိုတော့ တော်တော်သက်သာတာနဲ့ အဲဒီ ဟိုတယ်ဘဲ ရွေးလိုက်တယ်။ Legoland ရောက်ရင် လက်မှတ်ကောင်တာမှာ တန်းစီရတာ သက်သာတယ်ဆိုပြီးယူလိုက်တာ။ Legoland ကလည်း စနေ၊တနင်္ဂနွေသွားရင် လူတစ်အားများမှာစိုးလို့ တနင်္လာတစ်ရက် ခွင့်ယူပြီး တနင်္ဂနွေမနက်ထွက်၊ တနင်္လာညပြန်ဆိုပြီး စီစဉ်လိုက်တယ်။ ခါတိုင်းဆို အင်တာနက်ကနေ ဘတ်စ်ကားလက်မှတ် အြမဲကြိုဝယ်လေ့ရှိပေမယ့် လူတော်တော်များများက ဘတ်စ်ကားဂိတ်ရောက်မှ ဝယ်လည်း ရတယ်လို့ပြောကြတာနဲ့ ​ဂိတ်ရောက်တော့ ၁၀နာရီလက်မှတ်လိုချင်တာ ၁၁ခွဲလက်မှတ်ဘဲရလိုက်တယ်။ နောက်ဆို ဘယ်လောက် လက်မှတ်လွယ်တယ်ပြောပြော ကြိုဝယ်ထားတာဘဲကောင်းပါတယ်။ အသွားအပြန်လက်မှတ်က တစ်ယောက်ကို ရင်းဂစ် ၇၀လောက်ဘဲ။
ကေအလ်ကနေ မနက်၁၁နာရီခွဲလောက်မှ ထွက်ရတော့ ဂျိုဟိုးဘာရူးကို လေးနာရီနီးနီးမှ ရောက်တယ်။ ဟိုတယ်ရောက်တော့ check-in ဝင်ပြီး ခဏနားလိုက်တာ မှောင်ခါနီးနေပြီ။ အဲအချိန်မှ နေ့လည်စာနဲ့ ညနေစာ ပေါင်းစားဖို့ City Square ကိုသွားရတယ်။ နောက်အခေါက်ဆိုရင် City Square တစ်ဝိုက်က ဟိုတယ်တွေမှာတည်းရင် ပိုအဆင်ပြေမယ်။ Hotel Sentral က တော်တော်ကောင်းပေမယ့် City Square ရောက်ဖို့ ၁၀မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရတယ်။ လမ်းမကြီးကိုဖြတ်ရသေးတာဆိုတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ City Square မှာ စားပြီးတော့ အထဲမှာ လျှောက်လည်၊ ပြီးတော့ Danga Bay ကို ခဏသွားတယ်။ ပြီးတော့ အားလုံးလဲ ပင်ပန်းတာနဲ့ ဟိုတယ်ဘဲပြန်နားကြတယ်။
မနက်ကြတော့ JB Sentral ကနေ Legoland ကို တိုက်ရိုက်ရောက်တဲ့ ဘတ်စ်ကားက တစ်နာရီမှ တစ်စီးထွက်တာ။ မနက်၉နာရီခွဲကားမှီအောင်သွားပါတယ်ဆို တက္ကစီသမားက ကားဂိတ်မှားပြီး City Square ရှေ့က ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာ ချပေးသွားတာနဲ့ ပြန်လိုက်ရှာရင်း ကားလွတ်သွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ Legoland ကို တက္ကစီနဲ့ဘဲ သွားလိုက်ရတယ်။ ပုံမှန် တက္ကစီမီတာက၂၅ကျပ်လောက်ဘဲကျတာ။ surcharge အတင်းတောင်းတာနဲ့ လေးဆယ်ကျော် ပေးလိုက်ရတယ်။ ဂျိုဟိုးဘာရူးက ကျယ်တော့ တစ်နေရာ တစ်နေရာ အဝေးကြီးရယ်။ ဘတ်စ်ကားကလည်း တစ်နာရီမှ တစ်စင်းလောက်ထွက်တာ။ လေဆိပ်၊ Legoland၊ Hello Kitty Town၊ KSL city တွေသွားတဲ့ ဘတ်စ်ကားအချိန်စာရင်း ကိုကြည့်ထားရင် ပိုအဆင်ပြေတယ်။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်က CIQ checkpoint အောက်နားလေးတင်ဘဲ။
Legoland ကနေ ညနေကြ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို တန်းသွားမယ်ဆိုပြီး luggage တွေပါ တစ်ခါတည်း သယ်လာခဲ့လိုက်တယ်။ အပြင်မှာရော အထဲမှာပါ Locker တွေငှားလို့ရတယ်။ Locker အသေးက တစ်ရက်ကို ၂၀၊ အကြီးက လေးဆယ်။ ဖုန်းရယ်၊ ကင်မရာတစ်လုံးရယ်ဘဲယူပြီး ကျန်တာတွေအကုန် Locker ထဲထည့်ခဲ့လိုက်တယ်။ Locker က ပါ့စ်ဝေါ့နဲ့ဆိုတော့ ကြားထဲမှာ ကြိုက်တဲ့အချိန်ဖွင့်ပြီး လိုတဲ့ပစ္စည်းထုတ်လို့ရတယ်။ စာတော်တော်ရှည်သွားပြီ။ Legoland ထဲခုမှရောက်မှာ။ :D ဝင်ကြေးက တစ်ယောက်ကို ရင်းဂစ် ၁၄၀။ online ကနေ တစ်ပါတ်ကြိုဝယ်ရင် ၂၀% လျှော့ပေးတယ်။ နီးမှ စီစဉ်ဖြစ်လို့ ဟိုတယ်က ပေးတဲ့ package ဘဲ ဝယ်လိုက်တာ။
အပြင်ဘက်မှာ အဆင်မပြေခဲ့သလောက် Legoland ထဲရောက်မှ အမောပြေတော့တယ်။ အထဲမှာ group ပုံရိုက်ချင်တဲ့အခါ ကူပြီး ရိုက်ပေးတဲ့ staff တွေရှိတယ်။ တော်တော့်ကို ဖော်ရွေကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့ရိုက်ပေးတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေလည်း တော်တော်ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကို ရိုက်ခိုင်းရတာထက်တောင် လှသေးတယ်။ :D ကိုယ်ရိုက်ချင်သလောက် မညည်းမညူ ရိုက်ပေးတယ်။ ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေက နေတစ်အားပူတယ်ပြောကြပေမယ့် အဲနေ့က မိုးအုံ့နေလို့ တော်တော်နေလို့ကောင်းတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေတော့ မှောင်မှိုင်းမှိုင်းတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ စဝင်ဝင်ခြင်း miniland ကို အရင်ရောက်တယ်။ အာရှက အထင်ကရနေရာတွေကို lego လေးတွေနဲ့ ပြန်ဆောက်ထားတာ။ ကစားကွင်းတွေဘက်နဲ့စာရင် miniland ကို အချိန်ပေးပြီး ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် lego လေးတွေက အားလုံး လေးထောင့်တုံးတွေဆိုတော့ အချိန်ကြာကြာ စူးစိုက်ပြီးကြည့်ရင် pixelated ဖြစ်ပြီး မူးလာလိမ့်မယ်။ :D
ဘန်ကောက်က Wat Arun ဘုရားကျောင်း ပုံစံငယ်
မလေးရှားက ပူထရာဂျာယာပလီ ပုံစံငယ်
မြန်မာက ကရဝိတ်နန်းတော်ရဲ့ ပုံစံငယ်
လုပ်ထားတာ အရမ်းအနုစိတ်တယ်။ အနောက်ဘက်နားက ဂိတ်စောင့်နေတဲ့ ရဲမက်၂ယောက်ရယ် တံတားပေါ်က ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရယ်ကအစ lego လေးတွေနဲ့ အသေးစိတ်ကို လုပ်ထားတာတွေ့တော့ တော်တော်သဘောကျသွားတာ။
တရုတ်ပြည်က Forbidden Palace၊ အနောက်မှာ ဂရိတ်ဝေါရယ်၊ ပန်ဒါ သေးသေးလေး တွေရယ်လည်း လုပ်ထားတယ်။
ပြီးတော့ Dino Island မှာ ရေလွှာလျှော သွားစီးတယ်။ လူနည်းတော့ တန်းစီစရာသိပ်မလိုတာနဲ့ ၂ခါစီးလိုက်တာ တစ်ကိုယ်လုံးရွှဲရော။ အထဲမှာ Body Dryer ဆိုပြီး လူသုံးလေးယောက်ဝင်လို့ရတဲ့ heater
တွေတော့ ထားထားပေးတယ်။ ပိုက်ဆံ၁၀ထည့်ရင် ၁၀မိနစ်လောက် ဖွင့်ပေးတယ်။ လူကို ရေလေးနဲ့စိမ်ပြီး စက်ထဲထည့် ကင်ထားသလိုဖြစ်ရော။ :P
Body dryer အခြောက်ခံစက်
နောက်တော့ Lost Kingdom Adventure ဆိုပြီး အထဲမှာ ပိရမစ်ရုပ်တွေကို လေဆာနဲ့ပစ်ရတာစီးတယ်။ The Dragon Kingdom မှာ roller coaster စီးတယ်။ 5D cinema ထဲမှာ လူတော်တော်များနေလို့ တန်းမစီခဲ့တော့ဘူး။ Star World Miniland Displayကို မမြင်ဘဲ ကျော်သွားတာတော့ နောင်တရလို့ မဆုံးဘူး။
Legoland ထဲမှာ ရှိသမျှ rides တွေအကုန်က child-friendly ဖြစ်တော့ လူကြီးတွေအတွက်ကြတော့ တစ်အားကြီး thrilling ဖြစ်မနေဘူး။ ခြောက်နှစ်အထက် ကလေးဆိုရင် အကုန်ကစားလို့ရတာတွေဆိုတော့။ အဓိက attraction ကတော့ miniland ဘဲထင်တယ်။ အားလုံးကစားပြီး မောသွားတော့ miniland ထဲကို နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်တယ်။ အနုစိတ်လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံငယ်လေးတွေကို တစ်အားသဘောကျတာဘဲ။ Legoland ထဲမှာ နေ့လည်စားစရာ ဆိုင်သိပ်မရှိဘူး။ Souvenir တွေလည်း စျေးနည်းနည်ကြီးတယ်။ အြပင်တစ်ကြိမ် ထွက်ခွင့်ပေးတယ်။ အပြင်မှာ စားသောက်ဆိုင် တော်တော်စုံတယ်။ ပင်ပန်းနေကြပြီဆိုတော့ ပြန်မဝင်တော့ဘဲနဲ့ ဘတ်စ်ကားစောင့်ပြီး Larkin Bus Terminal ကို တန်းပြန်ခဲ့ကြတယ်။ ဘတ်စ်ကား အချိန်စာရင်း မှားဖတ်မိလို့ အကြာကြီး စောင့်လိုက်ရသေးတယ်။ :D အဲ၂ရက်လုံး ကားနဲ့ကို အကျိုးမပေးတာ။
Legoland ရှေ့မှာ Legoland Hotel လည်း စဖွင့်ပြီ။ အထဲက decoration တွေမိုက်တယ်။ အထဲမှာ Kingdom themed, pirate themed, adventure themed စသဖြင့် theme အမျိုးအမျိုးနဲ့ အခန်းတွေရွေးလို့ရတော့ ကလေးတွေဆိုရင် တော်တော်သဘောကျကြမယ်ထင်တယ်။ ကိုယ်အတွက်တော့ ပိုက်ဆံအလကားကုန်သလိုဘဲဖြစ်နေမှာ။ Legoland လည်း ဖွင့်တာ တစ်နှစ်ကျော်ဘဲရှိသေးပေမယ့် မလေးရှားကလူတွေ သိပ်စိတ်မဝင်စားကြဘူး။ ကလေးတွေသွားတဲ့နေရာလို့ သူတို့သတ်မှတ်ထားကြတာ။ ကလေးတွေနဲ့လာရင်တော့ ပိုပျော်ဖို့ကောင်းမယ် ထင်တာဘဲ။ တစ်ခေါက်လောက်ရောက်ဖူးပြီးရင် နောက်တစ်ခါထပ်သွားချင်လောက်အောင်တော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ နေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ Lego လေးတွေကို သဘောကျရင်တော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ =)
Nice write up. Thank you. Photos are great too!
Hope everything's good with you, friend.
22/1/14 9:41 PM
@Thet Naing Tun Thanks ;)
31/1/14 10:56 AM